Ikhaya DataNumen Partners
At DataNumen, Sifuna kwaye samkele ubuhlakani ukuze sandise ukufikelela kwimarike kwaye sinike abathengi bethu iimvumelwano ezongezelelweyotariimveliso kunye neenkonzo ezandisa utyalo-mali kunye namava abo DataNumen.
Sizinikela kakhulu kwiinkqubo zethu zamaqabane eziphuhliswe ngobuchule; kubandakanya uqeqesho, ukuthengisa, iinkonzo zobungcali kunye nenkxaso yophuhliso.
Iintlobo ze DataNumen IiNkqubo zoBabane
INkqubo yeQabane leSisombululo seQabane
Amaqabane esisombululo seshishini ngundoqo DataNumenAmanyathelo okwandisa ukufikelela kwizisombululo zeshishini. DataNumen kunye namaqabane ayo abonelela ngezixhobo kunye nemibutho yobungcali kufuneka inciphise ilahleko kwintlekele yedatha, yonyuse ukusebenza ngokukuko, kwaye iphucule amava abathengi.
Inkqubo yeqabane eliDibeneyo
Inkqubo yokudibana lithuba elihle lokuba ufumane imali ngokuthengisa iimveliso zokubuyisa idatha. Ukuba ungumnikazi okanye ulawula iwebhusayithi, ungathatha inxaxheba kwinkqubo yokubambisana. Samkela nabani na, kubantu abagcina iphepha elincinci lasekhaya kwiimagazini, kwiiportal, nakwiivenkile.
Ukutshintsha amakhonkco kunye nezinye iiwebhusayithi ezinxulumene nomxholo yeyona ndlela ilungileyo yokuvelisa umdla kunye nokugcwala kwiwebhusayithi yakho. Ngaphandle kweendwendwe ezifudukela ngqo kwindawo yakho zisuka kumaqabane otshintshiselwano ngekhonkco, isibonelelo sokwanda kweinjini yokukhangela efunyenwe kukuba iwebhusayithi yakho igxothwe kwii-hyperlinks nayo inokuba nkulu kakhulu.